ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုပရိသ China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်ညီလာခံ,လေ့လာကြရအောင်၏အောက်ဆုံးစျေး,ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve > ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုပရိသ
ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်ဟူသောအိတ် duster ၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုများနှင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏အရိုးစုများ၏အခြေစိုက်စခန်းကိုလည်းအလေးအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဟုခေါ်ဝေါ်သော fixed ဖုန်မှုန့်အိတ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ မြေမှုန့်အရိုးစုကိုလည်းအထူးပစ္စည်းကိရိယာကဖွဲ့စည်းသောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး frame ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်မှုန့်အရိုးစု features: ခိုင်မာတဲ့ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာနှင့်ဖြောင့်သဏ္ဌာန်။ ဖုန်မှုန့်အရိုးစု filter ကိုအိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်အရိုးစု၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက် filter ကိုအိတ်များ၏အလုပ်လုပ်ပြည်နယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာသာမန်မြို့ပတ်ရထားအရိုးစု, trapezoid အရိုးစုများနှင့်နွေဦးအရိုးစုနှင့်အတူအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်မြို့ပတ်ရထားဖုန်မှုန့်အရိုးစုနဲ့ trapezoid အရိုးစုဆိပ်ကမ်းကိုရှိပါတယ်။ အောက်ခြေနှင့်နွေဦး dedusting frame ကိုခံတွင်း၏အောက်ဆုံး; နှင့်အခြားဘောင်ကိုက်ညီခြင်း: Venturi ပြွန်, ဦးထုပ်ရုတ်သိမ်းရေး, ဒါပေါ်မှာစက်ကိရိယာနှင့်ဆွဲထား။ အကြှနျုပျ၏ Kang Jie သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကုမ္ပဏီတစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးထက်ပိုသန်းမီတာထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်ကုသမှုချေးခုခံနှင့်ရှည်သောအသက်နှင့်အတူ, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်ဖျန်းဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးစု၏အောက်ဆုံး၏အချင်းစသည်တို့ကို, 130, 170, 180 ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ dedusting အရိုးစု၏အောက်ဆုံး၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်: အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, ချေးခုခံ, ဝတ်ဆင်-ခုခံ, အကြမ်းခံမြင့်မားတည်ငြိမ်မှုနှင့်မြင့်မားသောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု 96 ~ 98% ဖြစ်တယ်, duster ၏ဖုန်မှုန့်ထိရောက်မှု ကျော်ကို 98% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ dedusting အရိုးစု၏အောက်ဆုံးများ၏အလိုက်အထိုက်နေတတ်:
မူဘောင်၏အောက်ခြေအားကြီးသောအလိုက်အထိုက်နေတတ်ရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောစက်မှုဘွိုင်လာနဲ့ဖုန်ထူသောနေရာများအတွက်ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် desulphurization အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူတွေရဲ့စံပြဘွိုင်လာ supporting ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
1. မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးဆက်စပ်ပစ္စည်း install လုပ်သောအခါ, ပူးတွဲမှာရေမရှိသောယိုစိမ့်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်အဆိုပါချုပ်ရိုးချိတ်ဆက်ရန်အက်ဆစ်ကိုခံနိုင်ရည်ကော်ကိုအသုံးပြုပါ။
2, အတွင်းပိုင်းမူရင်း 3/4 ဖို့ရေစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ပြေးကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည့်ချောမွေ့ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
3. အားလုံးတင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့အနားကွပ်အနားကွပ်အတိုင်းအတာနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ install လုပ်သည့်အခါလေထုယိုစိမ့်တားဆီးခြင်းနှင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သကဲ့သို့အဆိုပါအနားကွပ်ပူးတွဲ, ကျောက်ဂွမ်းကြိုးနှင့်ပြည့်စုံသည်။
4. သဘာဝကျောက်မြို့ပတ်ရထား Bende ပြားသို့မြင့်နှင့်ခြုံငုံဖွဲ့စည်းပုံမှာချောမွေ့ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချေးခုခံ, ပွန်းပဲ့ခုခံနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။
5, frame ကိုခံတွင်း၏အောက်ဆုံး၏အောက်ဆုံးအစဉ်အလာပွင့်လင်းပါးစပ်အောက်ဆုံးထက်ပိုထိရောက်သောပိတ်လိုက်သည်လေတိုက်စွမ်းအင်၏စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ပြင်ပလေထုညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း Valve
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်ညီလာခံ , လေ့လာကြရအောင်၏အောက်ဆုံးစျေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးများအတွက်ဖုန် Filter ကို Bag , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , သံမဏိပြားလေ့လာကြရအောင်စက်ရုံ , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Rotary စတား Valve အားကုန်